KABAHA CAANAHA EE YAROSLAVL: DHAMMAAN MACLUUMAADKA KU SAABSAN CAANAHA - XOOLAHA
Caanuhu waa badeecad aad uwanaagsan oo nolosheena bilawday. Waxay awood u leedahay inay gudbiso dhammaan qaybaha ugu muhiimsan ee nolosha iyo horumarka.
Sababtaas awgeed xoolo badani waa lo'da lo'da. Cunto noocan oo kale ah, xitaa marka lagu hayo daaqsasho lacag la'aan ah, ayaa awood u leh inay ku farxaan sayidadooda iyaga oo leh saami aad u sarreeya oo caano subag leh.
Ilaa hadda, xulashada iyo dabeecada adduunka ayaa soo saartay tiro badan oo ah nooca noocan ah, sidaas darteed, haddii aad rabto inaad hesho jacaylkaaga gaarka ah, ayaa ka dooran doona waxa.
Waxaan rabnaa inaan kuu sheegno si faahfaahsan oo ku saabsan caleemaha Yaroslavl ee lo'da, taas oo ah mid ka mid ah wax soo saar badan.
Waa maxay caanka ah ee Yaroslavl Burenka: kala hadal ku saabsan taranka
Tani waxaa la yiraahdaa Yaroslavl sababtoo ah waxaa la siiyay qaybta of Russia ee Federaalka. Waxaa intaa dheer, ma jirin wax xulasho ah oo loo adeegsanayay lo'daas.
Cunnooyinka ugu wanaagsan caanaha ilaa taariikhda ayaa la helay tan iyo sannado badan oo ah taranta sifooyinka caanaha. Si kastaba ha noqotee, hawsha taranka si ay u hagaajiso dastuurka, candhuufta iyo dabcan, waxay hagaajineysaa waxsoosaarka caanaha, wali waa socotaa.
Qaybinta lo'da Yaroslavl waa mid aad u ballaaran, taas oo kor u qaadday ma aha oo keliya waxqabadkooda, laakiin sidoo kale ay ku haboonaan karaan.
In taranta iyo haynta caanaha waa mid aad u fududahay in loo isticmaalo sida shimbir weyn, iyo sheyga shakhsi ahaaneed.
Sidaa daraadeed, lo'dooyinkani waxay ku habboon yihiin labadaba xaga daaqsiinta daaqsinka leh qadar ballaaran oo cagaaran ah, iyo cufan si loogu quudiyo xoogga iyo silage. Cuncunka lo'da waa mid aad u sarreeya, taas oo aad muhiim u ah dhalashada jiilasha cusub.
Noocyada muuqaalka wakiilada ee taranka iyo sifooyinka kala duwan
Inta badan, kuwan qurux badan oo qurux badan ayaa laga helaa suunka madow, inkastoo inta badan madaxa iyo taakada hoose ay badanaa la daboolay dhibco cad. Qaybta hoose ee addimada iyo caarada dharka daboolka ayaa sidoo kale caddaan ah.
Si kastaba ha noqotee, muhiim maahan in la soo waco madow-ryabya, sababtoo ah shakhsiyaadka qaarkood ma haystaan ​​dhibco dhan. Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah isweydaarka taranka ee noocyada kala duwan, wakiillada qaar ee Jaadka Yaroslavl waxay leeyihiin dharka cas-cas-cad.
Guud ahaan, wakiilada lo'da Yaroslavl waxaa lagu kala saari karaa dastuur xagal leh oo leh dastuur aad u xoog badan. Laf-dhabarku waa mid aad u xoog badan oo culus, taas oo ah sifo dabeecad oo caanaha ka dhiga oo ka dhigaysa mid aan ku habboonayn in ay u guuraan masaafo dheer.
Qaybta dhexe ee jidhka ayaa si fiican loo horumariyaa xayawaankan, madaxa waa mid aad u iftiimaya oo qalalan. Muuqaal cajiib ah oo ka mid ah taranka ayaa sidoo kale waa qaab muuqaal ah oo madaxa hore ah iyo muraayad aan caadi ahayn oo madow.
Geeska iyaga ka mid ah, inkastoo aan aad u weyn ee size, laakiin xoog leh, midab dhalaalaya. Muuqaal kale oo ka mid ah lo'da Yaroslavl, sida wakiilada nooca caanaha ee waxqabadka, waa dhererka celceliska qoorta. Maqaarka qoortu wuxuu ka kooban yahay lakabyo yar yar.
Ku dhiciddii jidhka ee taranka qeexan ee lo'da ayaa ka kacday xaqiiqda ah in feedhooyinkoodu si weyn u ballaadhan yihiin. Sidaa darteed, caloosha xayawaanka waxay u egtahay mid aad u muuqata. Laakiin gebi ahaan muruqyada jidhka oo dhan waa la jilicsan yahay, qiyaasta muruqa ma uruurinayso nolosha oo dhan, waxaana lagu soo bandhigi karaa qaab fuush ah oo khafiif ah.
Fench sidoo kale waa mid si aan toos ahayn loo horumariyo. Sababtan awgeed ayaa loo adeegsanayo isticmaalka yaroslavl sida lo'da ee qaybta hilibka ee gebi ahaanba rajo la'aan, inkasta oo guud ahaan natiijada hilibka hilibku ka soo baxaan waa mid ku qanacsan.
Maqaarka xayawaanku waa mid khafiif ah, oo ka dhigan qiimaha ugu yar ee warshadaha dharka. Maadaama maqaarka khafiifka ah iyo dufanka liita ee saboolka ah, wakiilada caleemaha waa arrin caadi ah u nugul heerarka kuleylka.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay waa inay qabsadaan hoyga hawada kulul, iyo walxaha barafaysan ee maqaarka diirran iyada oo aan la diyaarineynin iyo, marka la door bido, kuleylka.
Qodobada ugu muhiimsan ee lo'da Yaroslavl: intee in le'eg waa lo'da?
Heerka xayawaankani waa mid aad u ballaaran, xitaa inkastoo ay ka mid tahay lugaha gaaban ee dabiiciga ah (lafaha lugaha ayaa ah mid khafiif ah, taas oo ah sababta ay xooluhu marar badan u xanuunsadaan).
Gaar ahaan, koritaanka lo'da qiyaastii celceliska qiyaastii 125-127 sentimitir.
Ma jiraan faraqyo gaar ah oo kobcinaya inta u dhaxaysa lo'da iyo dibi.
Sidoo kale, ma jiraan faraqyo gaar ah oo lagu cabbiro xayawaanka, mana jiraan wax xuduudo kala duwan, bullshadaha oo dhan waxay gaari karaan cabbirka weyn:
Isku celcelinta dhererka dhererka torsoone waa 152-155 sentimitir.
Xabadka xayawaanku maaha qoto dheer, laga bilaabo 66 ilaa 70 sentimitir, iyo ballaadhkeeduna waa 35-37 sentimitir.
Metacarpus ee girthth waa 17-18 sentimitir.
Guud ahaan, aragtida laga helay lo'daas ayaa la sheegi karaa in jidhkooda ay aad u qoto dheer yihiinna kala jiidanayaan. Sidaa daraadeed, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa qiyaasta yaryar ee lo'da ee taranka la tilmaamay, taas oo dabcan aan la sheegi karin oo ku saabsan bullayaasha-inseminators, miisaankoodu ka dheeraan karo 1000 kg.
Hase yeeshee, sababtoo ah dhismaha isfahamka ee lo'da, dayactirka iyo quudinta sidoo kale ma noqon doonto mid adag oo dhaqaale ahaan qaali ah. Waxaa intaa dheer, waxaa habboon in aad fiiro gaar ah u yeelato xayawaanka xayawaanka ah, oo ah qaab muuqaal ah ku xiran milkiilayaasha.
Noocyada iyo sifooyinka kala duwan ee candhuufta
Udder ee caanaha caanaha ka mid ah lo'da sidoo kale waa mid ka mid ah shuruudaha taas oo laga yaabo inay kala soocaan dhammaan qaraabada kale. Waxay leedahay qiyaas aad u ballaaran, kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku ururiso caano badan oo aad si fudud u qaadatid ka hor waqtiga caanaha. Waxay leedahay qaab isku dhafan, taas oo ay ugu wacan tahay in aysan ka horjoogsanin lo'da inay dhaqaaqaan xitaa marka ay buuxsanto, waxayna kuu ogolaataa inaad si sahlan u wajahdo xayawaanka inta lagu jiro caanaha.
Laakiin muhiimada ugu muhiimsan ee caanaha yaroslavl waa meesha ku yaal ibta. Marka laga reebo xaqiiqda ah inay leeyihiin dherer dhexdhexaad ah oo ku habboon caanaha, waxaa loo dhigaa sida ugu ballaadhan ee suurtagal ah. Isla mar ahaantaana, masaafada u dhexaysa labada naasood ee hore waa ka weyn yahay masaafada u dhaxeysa labada ilbiriqsi. Sidoo kale, qaabka gumeysiga candho xoolo ah. Taas macnaheedu waa ka dib marka la sifeeyo, waa dhowr jeer oo ka yar size, wuxuu noqonayaa mid aad u jilicsan iyo xargo. Dhabarka, lakabka yaryar ee maqaarka ayaa la sameeyaa, taas oo ah kaydka candho xoolo.
Tilmaam aad u muhiim ah ee wax soo saarka caanaha ee lo'da ayaa ah tilmaame sida caanaha udder. Waxay muujineysaa sida ay tahay saamiga guud ee caanaha, kaas oo siinaya lo'da, siinta dhalidda labada dhinac ee caanaha.
Tilmaame-barahan ayaa tilmaamaya sida tooska ah ee dhammaan dhinacyada candhuufta ah ee la soo saaro, taas oo markaa ka dhigaysa suurtogalnimada in laga hadlo wax soo saarka iyo caafimaadka shakhsiyaadka lo'da. Wixii laantan, shaxdan waa 40-44%, taas oo muujinaysa wax soo saar aad u sarreeya wakiiladeeda.
Waa in sidoo kale la ogaadaa in maqaarka candho xoolo ah ee lo'da Yaroslavl waa mid khafiif ah, taas, oo leh daaqsasho lacag la'aan ah, badanaa waxay keenaysaa dhaawac. Xiidmaha caanaha ayaa si fudud loo horumariyaa. Sidaa daraadeed, daryeelka iyo kormeerka wakiilada caleemaha waa inay noqdaan kuwo aad u firfircoon, taas oo u oggolaanaysa in ay natiijooyin wanaagsan ku helaan qaabka wax soo saarka caanaha.
Maxay yihiin faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee jilibka Yaroslavl?
Dabcan, faa'iidada ugu weyn ee lo'da caanuhu waxay noqon kartaa oo keliya tilmaamayaasha wax soo saarka caanaha. Balse, aan ka hadalno waxoogaa yar, laakiin halkan waxaan ku aragnaa nuxurka dufanka badan ee caanaha, taasoo celcelis ahaan celcelis ahaan 4.4% (rikoodhka sare ee 6.1%).
Haddii aan tixgelinno celceliska muujinta dufanka dhammaan caanaha caanaha waa heerka 3,7%, markaa natiijadan waa in la tixgeliyaa. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la fiiriyo xaqiiqda ah in caanaha dufanku yahay, tayada sare ee tayada lehna waa ku haboon tahay in la sii wado hawlgalka.
Wax yar maaha muhiimadda astaamaha xasaasiga ah ee xayawaankani, kuwaas oo awood u leh in ay la dagaallamaan cudurrada kala duwan ee laga helo cunnooyinka sida caadiga ah. Iyo waxa ugu muhiimsan waa in lo'da Yaroslavl waa ugu adkaysi u leukemia ee lo'da.
Cudurkan waxaa si fudud looga qaadaa xayawaanka ilaa xayawaanka iyo maanta ma jirto siyaabo lagu daweeyo. Iyada oo guuldaradii xayawaankoodu waxay waxyeello gaarsiiyeen wax soo saarka caanaha.
Hase yeeshe, xitaa haddii ay dhacdo in cudur ka mid ah wakiil ka ah lo'da ee taranka la tilmaamay, leucosis uma badna in lagu gudbiyo shakhsiyaadka kale, inkastoo loo baahan yahay taxaddar loo baahan yahay in la qaado.
Tani waa qiimo weyn jilicsan sidoo kale sababtoo ah si ballaadhan loogu isticmaalo taranta. Gaar ahaan, hiddo-wadaha waxay awood u leeyihiin in ay soo gudbiyaan sifooyinka caanaha, oo ah khabiir ku takhasusay.
Waa wax yar oo ku saabsan cillado kuwaas oo udub dhexaad u ah taranka la tilmaamay
Ka mid ah cilladaha yar yar ee yaroslavl waxaa lagu magacaabi karaa oo kaliya cilladahooda jirkooda. Gaar ahaan, waa cufan aad u cidhiidhi ah, oo leh muruqyo liita. Sidoo kale, waxay leeyihiin dameer aad u ballaaran oo leh qaboojis iyo sambab lagu qaabilo. In wax soo saarka hilibka, kuwani waa astaamaha aad u xun.
Laakiin dhibaatooyinka intooda badani waxay siinayaan xayawaanka naftooda iyo milkiilayaashooda oo daciif ah. Iyada oo daaqsasho bilaash ah, tan badanaa waa sababta keentay jebinta cirridka iyo kala-baxyada, sidaas darteed, waxaa muhiim ah in hore loo mariyo aagga loo qoondeeyey in lo'da iyo meelaha laga tirtiro meelaha adag ee laga yaabo.
Sidoo kale, marka lagu hayo cimilada cimilada Yaroslavl, waxaad u baahan tahay inaad u diyaargarowdo xaqiiqda ah in xilliga dhalmada ka dib lo'da badanaa waxay ku dhacaan lugahooda hore oo aan istaagi karin iyaga wakhti yar.
Caleemaha Yaroslavl ayaa caan ku ah wax soo saarka: si faahfaahsan wax walba oo ku saabsan
Cuntada caanaha ee suurtogalka ah iyo sifooyinka muhiimka ah ee caanaha la soo saaro
Caanaha waxsoosaarka caanaha ee Yaroslavl waa mid cajiib ah, tan iyo celceliska caanaha celceliska wuxuu ka duwanaan karaa 2,700 illaa 3,500 kiiloogaraam oo caano ah xilliga nuujinta koowaad.
Mustaqbalka Wax-soo-saarka ayaa kaliya sii kordhaya, iyo daryeel caafimaad oo habboon, iyo sidoo kale quudin buuxda, waxqabadkoodu wuxuu kordhi karaa 5000-5500 oo kiilogaraam, oo ah tiradii ugu badneyd 11,590 kiiloogaraam oo caano ah.
Laakiin yeynaan khayaali ahayn, in tani ay tahay natiijada ugu sareysa ee soosaarka caanaha ee lo'da. Maanta, noocyo badan oo ajaanib ah oo ka mid ah lo'da caanaha ayaa la sameeyey, waxsoosaarka caanaha ee caanaha kuwaas oo aad uga sareeya tan lagu sharraxay.
Cawska Yaroslavl waxay ku hayaan jagooyinkooda sida ugu fiican ee caanaha caanaha oo kaliya sababtoo ah tayada dhadhanka sare ee caanaha iyo guryaha nafaqada.
Sidoo kale, waxay leedahay sifooyin aad u fiican, mid ka mid ah oo aan hore u soo sheegnay - dufanka caanaha. Laakiin marka laga reebo dufan, waxay ka kooban tahay borotiin badan, boqolkiiba kaas oo gaaraya 3.5-3.7.
Hilibka wax soo saarka ee jiilka yaroslavl ee lo'da: nooca hilibka lo'da ee aad ka heli karto naaxin wanaagsan?
Waa cad in inkastoo taranka la soo sheegay uu yahay caanaha, haddii daan ku dhalan, mustaqbalka waxaa loo oggol yahay in la gowraco, iyo da'da aad u da 'yar.
Inkastoo xaqiiqda ah in guud ahaan qaansarrada lo'da ay aad u liidato, sababtoo ah xajmiga weyn ee xayawaanka, qadarka hilibka la soo saarey natiijada ayaa weli ah natiijooyinka 55 ilaa 62% dhalidda.
Haddii aan xisaabta ku darno, celcelis, miisaanka qaansiirka waa 450-550 kiilo garaam, miisaankuna wuxuu ka bilaabmaa 700 ilaa 1200 (badanaaba, bulladu caadi ahaan waxay gaari karaan tiro badan) heerka sicirka waa mid aad u sarreeya.
Marka aad dhalashada, miisaankuna waa caadi ahaan 28-32 kiilogaraam, laakiin si deg deg ah ayey u koraan, gaar ahaan haddii ugu yaraan lixda bilood ee ugu horreeya ee ubaxa la quudiyo hooyada // boqol iyo boqolkiiba celceliska miisaanka maalinlaha ah ee haraaga iyo qashinka waa kala duwan yahay:
Horeba 6 bilood oo naasnuujin leh caanaha hooyada, qaalibka ayaa koraya ilaa 160-170 kg, iyo ilaa 18 bilood - ilaa 350-380 kg. Celceliska celceliska maalin kasta waa 700-750 garaam.
Haddii aad codsatid naas nuujin, markaa da'da 1 sano miisaanka dufanka badanaa wuxuu gaaraa 800-900 kiilo garaam. Korodhka miisaanka ayaa badanaa aan ka yarayn 800 garaam maalintii.
Isla mar ahaantaana, dufanka shakhsiyaadka dhallinyarada ah ayaa billaabaya in la dhigo intii hore, sababtoo ah cayayaanka ayaa loo oggol yahay in la gowraco da'da 1 sano. Xaqiiqdu waxay tahay in xayawaanka yaryar ee yar yar ee yaroslavl ee aad ka heli kartaa hilibka nafaqada leh iyo hilibka lo'da.
Marka lo'da caanaha loo oggol yahay in hilib laga helo da 'wayn, hilibkoodu ma sii dheeraan karo qiimaha sare.